Ethiopia: Sicir Bararka oo Sii Kordhaya – Rasaasa News
Dec 1, 2011 Ethiopia: Sicir Bararka oo Cirka u Sii Kacaya
Addis Ababa, December 1, 2011 [ras] – Qiimaha alaabooyinka, ayaa la sheegayaa in uu si aad ugu kacayo Ethiopia sanadkan, isla markaasna alaabooyinka qaarkood ay qiimahoodu hoos u dhacayaan. Arintan waxaa laga helay hayada uruurinta isbadalada qiimaha alaabooyinka u qaabilsan Ethiopia, sidaas waxaa qoray wargayska Capital.
Hayadu waxay sheegtay in rubac [1/4×12] xiga kan ee sanadkan ay qiimaha alaabooyinku kor u kici doonaan in ka badan 25%.
103 ka mid ka 184 alaabooyinka dalka laga isticmaalo, ayey qiimahoodu sare u kici doonaan saddexda bilood ee fooda inagu soo haysa sida ay warbixintu sheegtay. Alaabooyinka ay qiimahoodu kor u kacayaan waxaa ka mida noocyada hilibka, kirada guryaha la dego iyo qalabka dhismaha.
Alaabooyinkan ayey qiimahoodu sare u kici doonaan in ka badan 6.6% saddexda bilood ee soo socota. Waxaa iyaga uu qiimahoodu hoos u dhici doonaan 10.5% khudaarta noocyadeed iyada, taas oo ay ugu wacan tahay xiliga goosashada beeraha.
Qiimaha shamiitada ayaa la filayaa in uu hoos u dhaco ku yimaado, sababtuna waa soo saarkeeda dalka oo koradhay. Qiimaha Saliida ayaa isna hoose u dhici doona ka dib kolkii ay dawladu faragalisay, la keenayna dalka saliid aad u badan.Qiimaha Alwaaxa ayaa isna hoose u dhici doona xiliga la gali doono dartiis.
184-ta shay ee loo qaatay isbadalada ku imanaya qiimaha ayaa waxaa loo kala qaaday dhismaha iyo qalabka dhismaha, cuntooyinka, qiimaha dhulka banaan, matoorada dhismaha iyo kirada, sicirka biyaha, gaaska la shito iyo qiimaha baatroolka, kirada guryaha la dago iyo qiimaha iibkooda, mushaarada iyo qiimaha cuntooyinka.
Wargayska ayaa sheegay in celcelis ahaan qiimaha sicir bararka ee 184-ta shay uu noqon doono 23% sanadkan. Sicir bararkan uu wargaysku qoray ayaa ku dhaw 25%, wuxuuna la mid yahay sicir bararka sanadka oo ay hore u sheegtay wakaalada dhexe ee tira koobta Ethiopia bishii October 2011.
Kenya iyo Ethiopia oo Qaadi Doona Xanibaada Xadka u Dhaxeeya